Steeti nke Ire Ọdịnaya Ahịa | Martech Zone
Mọnde, Febụwarị 18, 2013 Monday, June 8, 2015 Jenn Lisak Golding
Site na teknụzụ niile dị ugbu a, a na-eri ọdịnaya n'ọtụtụ ụzọ dị iche iche na ọtụtụ ngwaọrụ dị iche iche. Ọ bụ ezie na desktọọpụ na mbadamba bụ nnukwu egwuregwu na egwuregwu ahụ, ngwaọrụ mkpanaka yiri ka ọ nwere nnukwu mmetụta na pịa site na ọnụego na nchọgharị. Na 2013, ire ahịa ọdịnaya ga-ewepụta nnukwu nloghachi na itinye ego ma ọ bụrụ na emechara nke ọma.
Anyị gbakọtara nyocha si anyị ụlọ ọrụ ịde blọgụ n'elu ikpo okwu ahịa, Compendium, na ngwa ahịa ozi-e email ahịa, ExactTarget, iji gosipụta mmetụta nke ịzụ ahịa ekwentị n'ime afọ ole na ole gara aga na ihe na-abịa. Mgbe edere data niile ọnụ, enwere ụfọdụ nchopụta na-eju anya:
Mepee ọnụego na ekwentị mkpanaaka amụbaala site na 300% site na Ọktọba 2010 ruo Ọktọba 2012.
Email mkpanaka mepụtara ugboro abụọ ka ọtụtụ mgbanwe dị ka ọrụ mmekọrịta ma ọ bụ ọchụchọ.
Ekwentị mkpanaaka nwere ike ọ gaghị apụta "na-agagharị." 51% nke ndị ọrụ ekwentị mkpanaka nke United States na-agagharị, chọọ, na ịzụta na ekwentị mkpanaaka n'ụlọ.
Nleta weebụ na ekwentị mkpanaaka ma ọ bụ mbadamba nkume kachasị elu na Thursday na 15.7%.
Izi ozi SMS na-aghọwanye ewu ewu, yana 31.2% nke ụlọ ọrụ na-eji nke a iji nwekwuo pịa site na.
Gini bu steeti ahia ahia di iche-iche? Banye na egwuregwu ahụ, ma ọ bụ tufuo ohere maka ịpị ụzọ, ntụgharị, na itinye aka.
Tags: nkwurịta okwumobile ọdịnaya ahịangwaọrụ mkpanakaSMS ahịaOzi ahia ahia SMSmbadamba
Feb 18, 2013 n’elekere 9:22 nke abali
Oge email na-emeghe n'etiti mkpanaka na desktọọpụ na-adọrọ mmasị! O yiri ka anyị na-awụli elu na nnukwu ihuenyo anyị n'ụtụtụ mana jiri nwayọ amalite ịlaghachi na ngwaọrụ mkpanaaka. Chaị!
Feb 18, 2013 na 2:51 PM
Ezi eziokwu, Doug. O juru m anya otu anyị si eji mkpịsị aka eji eme nchọgharị (ọ bụghị naanị SMS) n’ụlọ.
Feb 19, 2013 na 4:07 PM
Hey Jenn, ụfọdụ ezigbo stats na-adọrọ mmasị ebe a, hụrụ ya n'anya. Ajụrụ m ajụjụ banyere nke a na SES london afọ gara aga, yabụ chee echiche / echiche gị bụ:
Ọ bụ ezie na ị nwere ike ịhụ na ntụgharị dị na ngwaọrụ mkpanaka maka ịzụta na ecommerce, a na m eche ihe stats dị ka ole mepee / gụọ email mana wee gbanwee site na desktọọpụ, yabụ iji isi ihe mmetụ karịa maka ntụgharị (mekwaa ya ike iji soro?). Cheers - Russell
Feb 20, 2013 n’elekere 1:42 nke abali
Hey Russell! Daalụ maka okwu gị. Echere m na nke ahụ bụ nnukwu ajụjụ, m ga-arụ ụka na omume onwe m nwere ike igosipụta nke a (na-ele ya na ngwaọrụ mkpanaka, mana ịzụta na desktọọpụ).
Enweghị m ọnụọgụgụ aka, mana m na-ajụ ajụjụ a n'ihu. Ndị a bụ echiche m (karịa site na azụmaahịa azụmaahịa azụmaahịa):
- Ọ bụrụ n ’ịnọghị na nkasi obi nke ụlọ gị ma ọ bụ okpokoro gị, echere m na ntụgharị na ngwaọrụ mkpanaka (ịzụta) agbagogoro. Anyị bụ oge afọ ojuju ozugbo, ma ọ bụrụ na anyị chọrọ ya, anyị na-eme ya ugbu a. Ọ bụrụ na anyị achọghị ịzụta ozugbo ahụ, ebe ahụ, anyị nwere ike ịdebanye aha ma ọ bụ chekwaa ya n'ụzọ ụfọdụ. Agbanyeghị, ọ bụrụ na anyị ejichi ya dị ka mkpa dị mkpa ma ọ bụ ga-enwe agụụ, mgbe ahụ anyị ga-echefu ma ghara ịlaghachi ọ gwụla ma anyị jigide ibe edokọbara anyị ma ọ bụ nwee ncheta. Imirikiti ụlọ ọrụ B2C nwere ihe ncheta email ma ọ bụrụ na anyị etinye ihe na ụgbọ ibu azụmahịa, mana m ga-anwa anwa eche na ọ bụrụ na anyị azụtaghị na ekwentị mkpanaaka wee gaa ebe ahụ, anyị nwere ike ịzụta ya na desktọọpụ, ma ọ bụ, ọ dị mwute ikwu na-ere ahịa, anyị agaghị azụ ma ọlị.
- Si nsuso si ele ihe anya, nke a bụ ebe ahịa akpaaka na-abata. Enwere ngwaọrụ ndị na-enye gị ohere iji soro àgwà ndị na-azụ gị na-eme nchọgharị ma mepụta profaịlụ maka onye ahịa. Ọ bụrụ na ha bụ ndị ahịa mbụ, nke a dị mfe karịa ime. O nwere ike isiri gị ike ma ọ bụrụ na -abụbeghị nkewa dị ka atụmanya na sistemụ gị.
- Ime otutu isi ihe na-eme ka o sie ike soro mgbanwe? Eeh. Kpamkpam. Ma nke ahụ ọ pụtara na ọ gaghị ekwe omume? Mba - anyi choro ngwa oru di elu na ihe ndi raara onwe ha nye iji nwee oru oma kwesiri. Nke a na-akwụ ụgwọ, mana na njedebe nke ụbọchị, ọ ga-enyere aka na njigide na iguzosi ike n'ihe.
Yabụ, na mkpokọta, mba, enweghị m stats na ntụgharị na nchọgharị na mkpanaka na mbadamba, wee gbanwee na desktọọpụ, mana ịchụso omume ndị ahịa site na iji akpaaka ahịa kwesịrị inyere nke a. Daalụ! Ọ bụrụ na ịchọrọ mkparịta ụka ọzọ, biko nweere onwe gị iru na Twitter: @jlisak.